Xasan Sheekh oo si rasmi ah u furay Kal-fadhiga koobaad ee Aqalka Sare [SAWIRRO]
Xasan Sheekh oo si rasmi ah u furay Kal-fadhiga koowaad ee Aqalka Sare [SAWIRRO]
MUQDISHU, Somalia - Madaxweynaha uu Waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxa'uud ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray xarunta Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka cusub, ee dalka Soomaaliya.
Kalfadhiga aqalkaan ayaa furmey iyadoo weli maqan yihiin xubnihii aqalka sare u matalayey beelaha kasoo jeeda Somalialnd iyadoo wararku sheegayaan in muran badan ka taagan yahay sidii xubnaha Xildhibanada u qabsan lahayeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo uu wehliyey Safiirka Turkiga iyo Guddoomiyaha KMG ah ee Aqalka Sare ee Barlamaanka Soomaaliya, ayaa xarigga ka jaray dhismaha xarunta KMG ah ee Golaha Aqalka sare.
Xarunta oo ay dhistay dowladda Turkiga, ayaa markii hore waxay ugu talo-gashay inay noqoto goob Waxbarasho, ayaa waxaa u dhamaystiran adeegyadeeda, sida qalab xafiisyo kala duwan iyo Hoolal Shirarka lagu qabto.
Xaruntaan oo markii hore ahaan jirtey Iskuul dowlada Talyaaniga dhistey intii dalka Somalia uusan qaadan xornimada taasoo dowlada Madaxweyne Xasan Shiikh ku wareejisay wadanka Turkiga.
Dowlada Turkiga ayaa dhismahaaas gabi ahaanba dhulka dhigtey iyadoo ku badashay dhismi naqshadiisu lamid tahay kuwa ka dhisan dalka Turkiga.
Dhanka kale, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa furay Kalfadhiga koobaad ee aqalka Odeyaasha, ee Baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo Sanatorrada cusub maanta ay yeesheen Kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii lagu dhaariyay Muqdishu Bishii December.
Guddoomiyaha KMG ah ee aqalka odeyaasha ee Barlamaanka Soomaaliya Maxamed Xuseen Raagge, ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey furitaanka xaruntaan, dowladda Turkiga ayuu si weyn ugu ammaanay waxbqadkooda Soomaaliya, waxa uu sheegay in dhowaanna ay si dhab ah u guda-geli doonaan howlaha looga fadhiyo.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Danjire Olgen, ayaa sheegay in mashruucan lagu dhisay xaruntaan uu socdey laba sanno, haddana ay ku howlan tahay dowladda Turkiga in Muqdishu ay ka fuliso mashaariic ka ballaaran kuwaan.
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa uga mahadceliyey dowladda Turkiga dhismaha xaruntaan weyn, waxa uu tilmaamay in xarunta Aqalka odeyaasha ay si KMG ah ugu shaqeyn doonaan, ayna ahaan doonto goob waxbarasho, dhowaan waxaa uu xusay in uu bilaaban doono dhisme weyn oo ay lahaan doonaan labada aqal ee Barlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay.
Ugu dambeyn Madaxweynaha dowlada Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kula dardaarmay xubnaha aqalka odeyaasha ee Barlamaanka Soomaaliya in ay guda galaan shaqooyinkooda, dowladduna ay xoogga saari doonto in ay soo dadajiso waxyaabaha ka haray adeegyada ay u baahan yihiin.
Cabdulqaadir Cosoble oo ku guuleystey xubinta xildhibaanka aqalka hoose ee Barlamanka Somalia
Soomaliya 18.11.2016. 14:18
JOWHAR, Somalia- Doorashada aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka Somalia oo maanta ka socotey magaalo madaxda maamulka Hir-Shabeele ee Jowhar ayaa waxaa xubin kamid ah kuraasta loo tartamyey ku guuleystey Siyaasi Cabdulqaadir Cosoble Cali islamarkana horey u ahaa& ...
Doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo, Baydhobo iyo Jowhar
Soomaliya 09.11.2016. 19:02
​Puntland: Moorgan oo looga guulaystay doorashada Aqalka Sare [Sawirro]
Puntland 20.10.2016. 15:23
Prof. Jurile oo hal cod ku guuleystey aqalka sare Barlamanka Somalia
Puntland 20.10.2016. 11:43
Barlamanka Puntland oo dhageysanaya khudbadaha musharaxiinta aqalka sare Somalia
Puntland 19.10.2016. 10:35
Puntland 16.10.2016. 21:05
Madaxweynaha Puntland oo markale dib u magacaabaya aqalka sare Barlamanka Somalia
Puntland 12.10.2016. 08:55